समाज – Page9– Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२४ श्रावण २०७७, शनिबार १८:१६ English
दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकाले भन्यो, ‘बाह्रै महिना नेपाली सेना चाहियो’ २४ कार्तिक २०७६, आईतवार १२:४५
मुस्लिम धर्मगुरुको जन्मदिनमा बिरामीलाई फलफूल बितरण २४ कार्तिक २०७६, आईतवार ०९:५८
बुटवल, २४ कार्तिक । मुस्लिम धर्मगुरु पैगम्बर हजरत मोहम्मद मुस्तफाको १४९४औं जन्मोत्सवको अवसरमा रजा ए मुस्तफा मस्जिद बुटवलले प्रादेशीक अस्पतालमा उपचाररत ३ सय बिरामीलाई फलफूल वितरण गरेको छ । मस्जिदले शनिबार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका बिरामीहरुलाई फलफूल वितरण गरेको हो..
मोहम्मद जयन्तीमा बिदा दिन सिफारिस २२ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १३:५७
काठमाडौँ, २२ कार्तिक । मुस्लिम आयोगले इस्लाम धर्मका प्रवर्दक पैगम्बर मोहम्मदको जन्मदिनमा सार्वजनिक बिदा दिन सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ । मुस्लिम समुदायका अन्य चाडपर्व इद र बकरिदमा जस्तै मोहम्मद जयन्तिको दिनमा पनि सार्वजनिक विदा दिन आयोगले गृहमन्त्रालयमा सिफारिस गरेको हो..
काठमाडौँ, २१ कार्तिक । काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र नयाँ विद्यालय सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउने भन्दै महानगरपालिकाले नयाँ विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति नदिने निर्णय गरेको हो । विद्यार्थी सङख्याका आधारमा विद्यालय धेरै भएकाले नयाँ..
छठ पर्व सुरु, आज नहाय–खाय विधि गरिँदै १४ कार्तिक २०७६, बिहीबार ०९:४२
काठमाडौँ, १४ कार्तिक । छठ पर्व आजबाट सुरु भएको छ । छठको पहिलो दिन आज नहाय–खाय विधि गरिँदैछ । चार दिनसम्म मनाइने छठपर्वअन्तर्गत पहिलो दिनमा नहाय–खाय विधि गरिन्छ । आजको दिनलाई अरबा–अरबाइन पनि भनिन्छ । व्रतीले भोजनमा माछा, मासु, लसुन, प्याज, कोदो, मसुर वस्तु परित्याग गरी आजकै दिनदेखि..
नेवार समुदायको ‘किजा पूजा’ आज, सरकारले दियो सार्वजनिक बिदा १३ कार्तिक २०७६, बुधबार ०९:४३
काठमाडौँ, १३ कार्तिक । मंगलबार भाइटीका नलगाएका नेवार समुदायले आज बुधबार लगाउँदैछन् । मंगलबार म्हः पूजा अर्थात् आत्मपूजा गरेका नेवार समुदायले बुधबार किजा पूजा अर्थात् भाइटीका लगाउदै छन् । नेवार समुदायले मंगलबार नेपाल सम्वतको नयाँ वर्ष भएकाले आज किजा पूजा मनाउन लागेका हुन् ।..
तिहारको तेस्रो दिन, कुकुरको पूजा गरिँदै १० कार्तिक २०७६, आईतवार ०९:२०
काठमाडौँ, १० कार्तिक । आज यमपञ्चकको तेस्रो दिन अर्थात । कुकुरको पूजा तथा कुकुरलाई मीठामीठा खानेकुरा खान दिएर मनाइँदैछ । कुकुर तिहार यमपञ्चकको दोस्रो दिन पर्ने भए पनि यस वर्ष तिथिको घटबढका कारण तेस्रो दिन पर्न गएको छ । कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन कुकुरलाई मीठामीठा परिकार खान दिए..
आधुनिक देउसीः सरकारसँग ‘विकास र समृद्धि’को दक्षिणा माग ९ कार्तिक २०७६, शनिबार १४:०१
रासस, काठमाडौँ, ९ कार्तिक । सुरुङमार्ग, रेलमार्ग बन्ने जलमार्ग कुरा सुन्दा पनि आज खुशी लागिराछ समृद्धिको सपनाको साकार रूप चाहियो नेपालीको मुहारमा खुशी सुख चाहियो।” उज्ज्यालो र सद्भावको चाड दिपावलीमा समाज रुपान्तरणमा सघाउने गीत–सङ्गीत र रचनासहित समाजका अन्य वर्गझैँ..
तिहार सुरु, कुन दिन के को पूजा ? ८ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १०:०८
काठमाडौँ, ८ कार्तिक । तिहार आजदेखि सुरु भएको छ । तिहार सुरु भए पनि कागपूजा भने भोलि गरिँदै छ । कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि सुरु हुने तिहार अर्थात् यमपञ्चकको पहिलो दिन आज बेलुकी यमदीपदान शुरु गर्नुपर्ने नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिले जनाएको छ । यस वर्ष यमदीपदान शुक्रबारदेखि सुरु..
भाइटीकाको शुभ साइत सार्वजनिक ३ कार्तिक २०७६, आईतवार १७:०८
काठमाडौँ, ३ कार्तिक । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले तिहारको भाइटीकाको शुभ साइत सार्वजनिक गरेको छ । समितिले भाइटीकाको साइत सार्वजनिक गरेको अध्यक्ष प्रा.डा. रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए । कात्तिक १२ गते मङ्गलबार बिहान ११ः५५ बजे भाइटीकाको साइत उत्तम रहेको उनले बताए । कात्तिक १२..
खड्गभवानी कोतमा मौलो पूजासहित सामूहिक टीका २३ आश्विन २०७६, बिहीबार ००:३५
बेनी, २२ असोज । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ ज्यामरुककोटमा अवस्थित ऐतिहासिक तथा सामरिक महत्वले युक्त खड्गभवानी कोतमा समृद्धि र सहकालको कामना गर्दै सामूहिकरुपमा मौलो पूजा गरी टीका ग्रहण गरिएको छ । घटस्थापनादेखि बडादशैँको दिनसम्म दुर्गा भवानीको पूजा अर्चना गरी कोत परिसरमा रहेको..
नेपालगञ्जमा भएको विभिन्न घटनामा तीनको मृत्यु २० आश्विन २०७६, सोमबार ०१:०४
नेपालगञ्ज, १९ असोज । नेपालगञ्जस्थित रानीतलाउमा डुबेर आज एक जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार नेपालगञ्ज–७ का २३ वर्षीय सुनिल भित्रीकोटीको सो तलाउमा डुबेर मृत्य भएको हो । सोही तलाउमा डुङ्गा चालकका रूपमा कार्यरत उनको अत्यधिक मदिरा सेवन गरी डुङ्गा चलाउँदा..
दशैँ खर्च जुटाउन दाङ आइपुगे राउटे ११ आश्विन २०७६, शनिबार ०७:०९
घोराही, १० असोज । परापूर्वकालदेखि जङ्गली जीवन बिताउँदै आएका राउटे समुदायका अगुवाहरु दशैँ खर्च जुटाउन दाङका विभिन्न सरकारी कार्यालय, सङ्घसंस्थालगायतका स्थानमा आर्थिक रकम जुटाउँदै हिँडेका छन् । शुक्रबार घोराही उपमहानगरपालिकामा आर्थिक सहयोग जुटाउन आएका उनीहरुले अहिलेसम्म रु १०..
काठमाडौँ खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषित १ आश्विन २०७६, बुधबार ०९:४६
काठमाडौँ, १ असोज । काठमाडौँ जिल्ला खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भएको छ । मङ्गलबार जिल्ला खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिले आयोजना गरेको समारोहमा प्रदेशसभा सदस्य नारायण सिलवालले काठमाडौँ जिल्ला खुला दिसामुक्त भएको पत्र पढेर घोषणा गरेका हुन । भदौ २४ गते काठमाडौँ..
मनाइयो पितृ सम्मान दिवस १४ भाद्र २०७६, शनिबार ०१:५९
काठमाडौँ, १३ भदौ । भाद्र कृष्ण औँशीका दिन मनाइने बुबाको मुख हेर्ने पर्व आज पिताप्रति आदरभाव प्रकट गरी मीठा चीजबीज खान र राम्रा कपडा लगाउन दिएर मनाइएको छ । यस पर्वमा छोराछोरीले परम्पराअनुसार आ–आफ्ना बुबालाई मनपर्ने मिठाई तथा भोजन खुवाइ आदर सम्मान प्रकट गरी बुबाको मुख हेरेका छन् ।..